Ii-FAQs-Recen Technology Co., Ltd.
Zeziphi iziqinisekiso onazo?
Inkampani yethu ifumene i-ISO9001: i-2008, ngeSiqinisekiso soMgangatho weZiko lokuLawula i-China yoKwakha oomatshini boKwakha i-Urban, nge-SGS, i-CE Certification.
Nceda uqhagamshelane nathi ngokuqhubekayoulwazi
Kutheni ukhetha Recen:
I-RC-A11-II yinkqubo yethu yamva nje yokhuseleko yemisebenzi emininzi ye-Tower crane, i-Load Moment Indicator edibeneyo, i-Anti-collision & Zone Protection System kunye.
1.10 intshi LCD touch screen ukubonisa, kubonakala ngakumbi
2.I-interface ye-man-machine enobubele;yenza ulungelelwaniso lwe Tower crane & Umqobo, kunye nokhuseleko lwe Tower crane ngaphandle kwe-line (Ngokhetho)
3.Izinga eliphezulu lokhuseleko olukhuselekileyo;uvavanyo olungqongqo eliphezulu kunye nobushushu obuphantsi, anti-fouling kunye anti-corrosion.
I-4.Izinzile, ezifanelekileyo, ubomi benkonzo ende yenkqubo;
5.Easy ukufakwa kunye nokulinganisa;
6.I-Encoder yokuSlewing: Akukho ndawo ifileyo.
I-7.I-transceiver yeDatha eKhethekileyo, ekhethiweyo malunga namajelo e-100, yenza uxhumano oluzinzileyo, olude.
Nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya .
Ithini inkqubo yakho yokuvelisa?
1. Isebe lemveliso lihlengahlengisa isicwangciso semveliso xa lifumana umyalelo wemveliso owabelwe okokuqala.
2. Izinto eziphathekayozilungiselele kakuhle.
3. Lungisa izixhobo zokusebenza ezihambelanayo.
4. Emva kokuba zonke izixhobo zilungile, abasebenzi beworkshop yemveliso baqala ukuvelisa.
5. Abasebenzi bokulawula umgangatho baya kwenza ukuhlolwa komgangatho emva kokuveliswa kwemveliso yokugqibela, kwaye ukupakishwa kuya kuqalisa ukuba kuphumelele ukuhlolwa.
6. Emva kokupakishwa, imveliso iya kungena kwindawo yokugcina imveliso egqityiweyo.
Lide kangakanani ixesha lakho lokuhanjiswa kwemveliso eqhelekileyo?
Ngokuqhelekileyo, ixesha lokuhambisa liphakathi kweentsuku ze-5 zokusebenza.Ukuveliswa kobuninzi, ixesha lokuhambisa li7-15 iintsuku emva kokufumana idiphozithi.Kwiseli yoMlayisho owenziwe ngokwezifiso wesalathisi somzuzu wokuLayisha, kuya kuthatha i-10-15days.Ixesha lokuziswa liza kusebenza emva kokuba ① sifumene idiphozithi yakho, ② kwaye sifumene imvume yakho yokugqibela yemveliso yakho.Ukuba ixesha lethu lokuhambisa alihambisani nomhla wakho wokugqibela, nceda ujonge iimfuno zakho kwiintengiso zakho.Kuzo zonke iimeko, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana neemfuno zakho.Kwiimeko ezininzi, sinokukwenza oku.
Zeziphi izixhobo zonxibelelwano lwe-intanethi onazo?
Izixhobo zonxibelelwano zenkampani yethu kwi-Intanethi ziquka iTel, i-imeyile, iWhatsapp, uMthunywa, iSkype, iLinkedIn, iWeChat.Umboniso wevidiyo unokubonelelwa kwi-Youtube.
Layisha Umzuzu, Anti Collision System For Tower Crane, Mobile Crane Nvq, Tower Crane Load Moment Isalathisi, I-Mobile Crane Qatar, Layisha Moment Isalathisi,